Hay’ad Caalamiga Ah Oo Sheegtay In Shirkado Hubka Tahriibiya Sii Dhexmariyaan Somaliland – somalilandtoday.com
Hay’ad Caalamiga Ah Oo Sheegtay In Shirkado Hubka Tahriibiya Sii Dhexmariyaan Somaliland
(SLT-Hargeysa)-Idaacadda caalamiga ah ee dawladda Faransiiska ayaa sheegtay hub sharci darro ah oo laga soo dejiyo dalka Jabuuti la sii dhexmariyo Somaliland. Warbaahinta dibadda la hadasha ee Faransiiska RFI waxay waraysatay masuul sare oo ka tirsan hay’adda xogaha sirdoonka baahisa ee Exx Africa oo dhawaan shaaca ka qaaday warbixin xambaarsan in Jabuuti xarun u noqotay hubka sharci darrada ah.
Hay’adda Exx Africa oo fadhigeedu yahay Ingiriiska waxay takhasus ku tahay xogaha sirdoon iyada oo saadaalisa kana digta khataraha dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Africa. Waxa ay baadhisteeda ku sheegtay in hubka la soo mariyo Jabuuti uu sii dhexmaro jamhuuriyadda Somaliland hase ahaatee eedahan kama ay hadal xukumadda Somaliland. Dawladda Jabuuti ayaa hore ugu sheegtay warbixinta mid cid gaar ahi maalgalisay oo lagu sumcad dilayo dekedaha Jabuuti.
Agaasimaha fulinta ee hay’adda EXX Africa Robert Besseling oo ay baadhistooda ka waraysatay idaacadda dunida la hadasha ee Faransiiska waxa uu sheegay in hub laga keeno meelaha ay ka taliyaan Xuutiyiinta Yemen laga soo dejiyo uu gaadho kooxaha hubaysan e Soomaaliya iyada oo la sii dhexmarinayo Somaliland.
“Hubkan waxa laga keena meelaha ay ka taliso jabhadda Xuutiyiinta ee Yemen, kadib wuxuu gaadha Jabuuti oo dhawaanahan dekedo adan laga casriyeeyay kadibna waxa uu hubkaasi gaadha waqooyiga Soomaaliya iyo kooxaha hubaysan,” Sidaas ayuu yidhi Mr Robert esseling wariyaha oo waydiiyay in halka hubkaasi ka gudba tahay Somaliland waxa uu yidhi “ Haa, taasi waa sax,” waxaanu sheegay in ubkaasi gaadho kooxaha hubaysan ee Soomaaliya ka dagaallama.
Mr Robert Besseling waxa uu intaasi ku daray in ay cadaymo u hayaan hubkan oo gaadhay kooxaha hubaysan ee Suudaan, Koonfurta sudaan iyo Itoobiya laakiin, aanay caddayn Karin in dawladda Jabuuti hubayso Alshabaab maaddaama ciidamadeeda oo AMISOM kamid ahi halkaas joogaan.
Waxa kale oo uu sheegay in hubkan maalgalintiisa iyo dhoofintiisaba ay ka shaqaystaan shirkado dhawr ah oo xidhiidh la leh dawladdaJabuuti, islamarkaana ay fududeeyaan masuuliyiin xukumadda ka tirsan iyo saraakiil militariga ka tirsan.
Waxa kale oo uu sheegay in dawladaha reer Galbeedka ee Saldhigyada Militari ku leh Jabuuti ay ka war qabaan arrintan laakiin, ay kacabsi qabaan haddii ay tallaabo ka qaadan in ay isku dhacaan dawladda Jabuuti, islamarkaana ay waayaan saldhigyadooda Militari.
Dawladaha Jabuuti iyo Jamhuuriyadda Somaliland ayaan eedahan culus ka bixin wax jawaab ah oo ku saabsan jiritaankeeda iyo in ayyihiin waxyaabo dano siyaasadeed ku lug leeyihiin.